Ajandaalee biyya diigan qolachuun kan danda’amu tokkummaa cimsuun yoo danda’amedha- Hayyoota – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Ajandaalee biyya diigan qolachuun kan danda’amu tokkummaa cimsuun yoo danda’amedha- Hayyoota
On May 17, 2022 84
Finfinnee, Caamsaa 9, 2014 (FBC) – Ajandaalee biyya diigan qolachuun kan danda’amu tokkummaa cimsuun yoo danda’ame ta’uu hayyoonni ibsan.
Ajandaalee biyya diigan diinota keessaa fi alaan dhiyaatan qolachuu fi ittisuun kan danda’amu tokkummaa biyyaalessaa cimsuun yoo danda’ame ta’uu hayyoonni siyaasaa eeran.
Ajandaaleen keessaa fi alaa dhiyaatan nageenya biyyaa booressuu keessatti ga’ee olaanaa kan qaban ta’uu hayyoonni kunneen Faanaa Broodkaastiing Korporeet waliin turtii taasisan ibsaniiru.
Ityoophiyaanonni duudhaalee tokko isaan taasisan waan qabaniif ajandaa diigumsaa fashaleessaa jiraachuu Yuunvarsiitii Siiviil Sarvisii Ityoophiyaatti qorataan Bulchiinsaa fi Misooma Afrikaa Dooktar Mahaammad Aliin addeessaniiru.
Yuunvarsiitii Baahir Daaritti barsiisaa Saayinsii Siyaasaa fi Hariiroo Idil Addunyaa kan ta’an Dooktar Qaalawangeel Minaalaa gamasaaniin, odeeffannoowwan sirrii ajandaalee farra tokkummaa biyyaa fi nageenyaa ta’an fayyaleessuu danda’an hawasa biraan ga’uun barbaachisaa ta’uu kaasaniiru.
Ityoophiyaanonni dhimma keessoo isaanii mariin furuun biyyoota diigaman irraa barachuu akka qaban hayyoonni kunneen yaadachiisaniiru.
Almaaz Makonnintu gabaase.